အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ သရဲအခြောက်ဆုံး စံအိမ်ကြီး Borley Rectory -
Posted on December 27, 2018 Author Sugar Cane	Comment(0)
၁၉၂၉ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက် ဘိုလေ (Borley) ကျေးရွာကို သိက္ခာတော်ရ ဆရာ (ခရစ်ယာန် ဘုန်းကြီး) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့် Lionel Foyster နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Marianne တို့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။
အဲဒီကျေးရွာမှာ သူုတို့လင်မယားနေထိုင်ရမှာက Borley Rectory လို့ ခေါ်တဲ့ အိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lionel တို့ လင်မယားဟာ ဒီအိမ်ကြီးမှာ နေထိုင်ရင်း ချောက်ချားဖွယ်ရာအဖြစ်တွေများစွာ ကြုံရပါတော့တယ်။ ပထမကတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ခြေသံတွေ၊ ထူးဆန်းတဲ့ မီးရောင်တွေနဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ စကားတီးတိုးသံတွေကို သူတို့ကြားကြရတာပါ။
တစ်စ တစ်စ ပိုဆိုးလာတော့ ခေါင်းလောင်းတွေ ရုတ်တရက်ထမြည်တာ၊ ပြတင်းပေါက်တွေ ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်တာ၊ အိမ်ထဲကို ခဲတွေ၊ ပုလင်းတွေနဲ့ အပစ်ခံရတာအထိဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မွေးစားသမီးလေးကို အခန်းထဲမှာ ထူးဆန်းစွာပိတ်လှောင်ခံရတာ၊ ဇနီးဖြစ်သူ Marianne တစ်ယောက် မမြင်ရတဲ့လက်တွေနဲ့ ရိုက်နှက်ခံရတာ၊ လေးလံတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ အပေါက်ခံရတာ၊ ကုတင်ပေါ်က ဆွဲချခံရတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ညဘက်မှာလည်း ခေါင်းပြတ်ရထားမောင်းသမားမောင်းလာတဲ့ မြင်းရထား၊ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ သီလရှင် စတဲ့ တစ္ဆေတွေကို တွေ့ရတာမို့ ဒီအိမ်ကြီးမှာ တစ္ဆေတစ်ကောင်မက ရှိနေပုံပါပဲ။ဒီအိမ်က သရဲတွေအားလုံးက ဆိုးဝါးတာတော့ မဟုတ်ဘဲ ဂရုဏာသက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ တစ္ဆေလည်း ရှိပါတယ်။ ဝိဉာဉ်တစ်ကောင် ဟာ နံရံပေါ်မှာ Marianne ငါ့ကို ကယ်ပါ လို့ သနားစဖွယ်ရေးသားထားပါတယ်။
Borley Rectory အိမ်ကြီး
ဒီလိုတွေကြုံရတာကြောင့် Lionel ဟာ သူကိုယ်တိုင် သရဲနှင်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မအောင်မြင်ဘဲ သူ့ကို ကျောက်တုံးနဲ့ အပေါက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် Lionel တို့ လင်မယားဟာ ဒီအိမ်ကြီးမှာ ဆက်လက်မနေရဲတော့ဘဲ စွန့်ခွာသွားပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ ဒီအိမ်ကြီးမှာ နေထိုင်လာသူအဆက်ဆက်ဟာ သရဲခြောက်ခံရခြင်း၊ ပုဏ္ဏကတိုက်ခံရခြင်းတွေကို ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ Lionel တို့ ရဲ့ အရင် သင်းအုပ်ဆရာလင်မယားဟာလည်း ပုဏ္ဏကတိုက်ခြင်းဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့နောက် ဒီရွာရဲ့ သိက္ခာတော်ရ ဆရာ နေရာကို ဆက်ခံမဲ့သူမရှိဘဲ လစ်လပ်နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ ဒီအိမ်ကြီးကို မူလဆောက်လုပ်သူနဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာတော်စပ်သူ Lionel တို့ ဟာ အကြောင်းမသိဘဲ ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။
Borley Rectory အိမ်ကြီးကို မူလဆောက်လုပ်သူ သိက္ခာတော်ရဆရာ Henry Bull က ၁၈၆၂ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလို မဆောက်ခင် ယခင်အဆောက်အဦးဟောင်းတည်ရှိစဉ်ကတည်းက အဲဒီဝန်းကျင်မှာ တစ္ဆေသရဲတွေစတင်ခြောက်လှန့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နာမည်အကြီးဆုံးက သီလရှင်တစ္ဆေဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအရ ယခင် အဆောက်အဦးမှာ သီလရှင်တစ်ဦး အရှင်လတ်လတ် တိုက်ပိတ်သတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြေကြမ်းတာကြောင့် Borley Rectory အိမ်ကြီးကို မဆောက်လုပ်ဖို့ ဒေသခံတွေက တားမြစ်ပေမဲ့ အကြောက်အလန့်မရှိသူ Henry Bull ကတော့ အိမ်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအိမ်ကြီးပြီးလို့ စတင်နေထိုင်ချိန်က စပြီး Borley Rectory အိမ်ကြီးမှာ လူတွေဟာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ခြောက်လှန့်ခံရပါတော့တယ်။
Lionel Foysterတို့ မိသားစု ထွက်သွားတဲ့နောက် ဒီရွာကို သိက္ခာတော်ရဆရာတွေ အသစ်မရောက်သေးခင် ၁၉၃၇ မှာ ဒီအိမ်ကြီးကို ငှားရမ်းလိုက်သူက သဘာဝလွန် ဖြစ်ရပ်တွေကို လေ့လာသူ Harry Price က ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သူနဲ့အတူ ဒီအိမ်အကြောင်းကို လေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ကာ အတူတကွ လေ့လာစုံစမ်းကြပါတယ်။
ဝိဉာဉ်တွေကို ဆင့်ခေါ်တဲ့နည်းနဲ့ စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ဟာ ဝိဉာဉ်နှစ်ခုနဲ့ ဆက်သွယ်မိပါတော့တယ်။ တစ်ခုကတော့ Marie Lairre ဆိုတဲ့ ဝိဉာဉ်ပါ။ သူဟာ ပြင်သစ်လူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီး သီလရှင်လောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှာတော့ ၁၇ ရာစုက ဒီအိမ်ကြီးပိုင်ရှင်ရဲ့သား ကို လက်ထပ်ဖို့ သီလရှင်ဘဝကို စွန့်လွှတ်ကာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို လိုက်လာခဲ့တာပါ။
အင်္ဂလန်မှာ လက်ထပ်ပြီး နေထိုင်ရင်း သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့ကို သတ်ကာ ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ နံရံတွေကြား မြှုပ်နှံခံရပါတယ်။ သူဟာ မကျွတ်လွတ်နိုင်သေးတာကြောင့် အခုလိုခြောက်လှန့်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ထပ်ဝိဉာဉ်ကတော့ Sunex Amures ဆိုတဲ့ ဝိဉာဉ်ပါ။ အဲဒီဝိဉာဉ်ကတော့ အသတ်ခံရသူရဲ့ အရိုးစုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ တစ်နေ့ကျရင် ဒီအိမ်ကြီးကို မီးရှို့ပစ်မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါသတဲ့။
နောက် နှစ်အနည်းငယ်အကြာ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာတော့ Borley Rectory အိမ်ကြီးဟာ တကယ်ပဲ မီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ မတော်တဆလောင်တဲ့မီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မီးလောင်အိမ်ကြီးရဲ့ တစ်နေရာမှာ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးရဲ့ အရိုးတွေကို တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် ကောင်းမွန်စွာ သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပါတယ်။
Related Article >>> ခေတ်အဆက်ဆက် သရဲရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးခံရတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်လုံးအကြောင်း
မီးလောင်ပြီးနောက် တွေ့ရတဲ့ Borley Rectory အိမ်ကြီး
အဲဒီကတည်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ သရဲအခြောက်ဆုံးလို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Borley Rectory စံအိမ်ကြီးဟာ အဆုံးသတ်ခဲ့တာပါပဲ။ ယောင်းတို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ရောက်ရင် အဲဒီအိမ်ကြီးနေရာကို သွားကြည့်မလားဟင် ….
References – prairieghosts , wikipedia
ခတျေအဆကျဆကျက သရဲပေါငျးမြားစှာ ရှိနတေဲ့အိမျကွီးဆိုပါလား
၁၉၂၉ ခုနှဈမှာ အင်ျဂလနျနိုငျငံ အရှဘေ့ကျ ဘိုလေ (Borley) ကြေးရှာကို သိက်ခာတျောရ ဆရာ (ခရဈယာနျ ဘုနျးကွီး) အဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျမယျ့ Lionel Foyster နဲ့ ဇနီးဖွဈသူ Marianne တို့ ရောကျရှိလာပါတယျ။
အဲဒီကြေးရှာမှာ သူုတို့လငျမယားနထေိုငျရမှာက Borley Rectory လို့ ချေါတဲ့ အိမျကွီးဖွဈပါတယျ။ Lionel တို့ လငျမယားဟာ ဒီအိမျကွီးမှာ နထေိုငျရငျး ခြောကျခြားဖှယျရာအဖွဈတှမြေားစှာ ကွုံရပါတော့တယျ။ ပထမကတော့ ထူးဆနျးတဲ့ ခွသေံတှေ၊ ထူးဆနျးတဲ့ မီးရောငျတှနေဲ့ ဘာမှနျးမသိတဲ့ စကားတီးတိုးသံတှကေို သူတို့ကွားကွရတာပါ။
တဈစ တဈစ ပိုဆိုးလာတော့ ခေါငျးလောငျးတှေ ရုတျတရကျထမွညျတာ၊ ပွတငျးပေါကျတှေ ပိတျလိုကျဖှငျ့လိုကျဖွဈတာ၊ အိမျထဲကို ခဲတှေ၊ ပုလငျးတှနေဲ့ အပဈခံရတာအထိဖွဈလာပါတယျ။ နောကျဆုံးအဆငျ့အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ မှေးစားသမီးလေးကို အခနျးထဲမှာ ထူးဆနျးစှာပိတျလှောငျခံရတာ၊ ဇနီးဖွဈသူ Marianne တဈယောကျ မမွငျရတဲ့လကျတှနေဲ့ ရိုကျနှကျခံရတာ၊ လေးလံတဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ အပေါကျခံရတာ၊ ကုတငျပျေါက ဆှဲခခြံရတာတှဖွေဈလာပါတယျ။ ညဘကျမှာလညျး ခေါငျးပွတျရထားမောငျးသမားမောငျးလာတဲ့ မွငျးရထား၊ လမျးလြှောကျနတေဲ့ သီလရှငျ စတဲ့ တစ်ဆတှေကေို တှရေ့တာမို့ ဒီအိမျကွီးမှာ တစ်ဆတေဈကောငျမက ရှိနပေုံပါပဲ။ဒီအိမျက သရဲတှအေားလုံးက ဆိုးဝါးတာတော့ မဟုတျဘဲ ဂရုဏာသကျဖို့ ကောငျးတဲ့ တစ်ဆလေညျး ရှိပါတယျ။ ဝိဉာဉျတဈကောငျ ဟာ နံရံပျေါမှာ Marianne ငါ့ကို ကယျပါ လို့ သနားစဖှယျရေးသားထားပါတယျ။
Borley Rectory အိမျကွီး
ဒီလိုတှကွေုံရတာကွောငျ့ Lionel ဟာ သူကိုယျတိုငျ သရဲနှငျဖို့ ကွိုးစားပမေဲ့ မအောငျမွငျဘဲ သူ့ကို ကြောကျတုံးနဲ့ အပေါကျခံလိုကျရပါတယျ။ အဲဒီနောကျ Lionel တို့ လငျမယားဟာ ဒီအိမျကွီးမှာ ဆကျလကျမနရေဲတော့ဘဲ စှနျ့ခှာသှားပါတော့တယျ။
တကယျတော့ ဒီအိမျကွီးမှာ နထေိုငျလာသူအဆကျဆကျဟာ သရဲခွောကျခံရခွငျး၊ ပုဏ်ဏကတိုကျခံရခွငျးတှကေို ရာစုနှဈနဲ့ခြီပွီး ခံစားခဲ့ရပါတယျ။ Lionel တို့ ရဲ့ အရငျ သငျးအုပျဆရာလငျမယားဟာလညျး ပုဏ်ဏကတိုကျခွငျးဒဏျကို မခံနိုငျလို့ထှကျပွေးသှားတဲ့နောကျ ဒီရှာရဲ့ သိက်ခာတျောရ ဆရာ နရောကို ဆကျခံမဲ့သူမရှိဘဲ လဈလပျနခေဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှ ဒီအိမျကွီးကို မူလဆောကျလုပျသူနဲ့ ဆှမြေိုးရငျးခြာ တျောစပျသူ Lionel တို့ ဟာ အကွောငျးမသိဘဲ ပွောငျးရှလေ့ာတာဖွဈပါတယျ။
Borley Rectory အိမျကွီးကို မူလဆောကျလုပျသူ သိက်ခာတျောရဆရာ Henry Bull က ၁၈၆၂ ခုနှဈမှာ ဆောကျလုပျခဲ့တာပါ။ ဒီလို မဆောကျခငျ ယခငျအဆောကျအဦးဟောငျးတညျရှိစဉျကတညျးက အဲဒီဝနျးကငျြမှာ တစ်ဆသေရဲတှစေတငျခွောကျလှနျ့နခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီမှာ နာမညျအကွီးဆုံးက သီလရှငျတစ်ဆဖွေဈပါတယျ။ ဒသေခံတှရေဲ့ယုံကွညျမှုအရ ယခငျ အဆောကျအဦးမှာ သီလရှငျတဈဦး အရှငျလတျလတျ တိုကျပိတျသတျခံခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မွကွေမျးတာကွောငျ့ Borley Rectory အိမျကွီးကို မဆောကျလုပျဖို့ ဒသေခံတှကေ တားမွဈပမေဲ့ အကွောကျအလနျ့မရှိသူ Henry Bull ကတော့ အိမျကွီးကို ဆောကျလုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအိမျကွီးပွီးလို့ စတငျနထေိုငျခြိနျက စပွီး Borley Rectory အိမျကွီးမှာ လူတှဟောပုံစံမြိုးစုံနဲ့ ခွောကျလှနျ့ခံရပါတော့တယျ။
Lionel Foysterတို့ မိသားစု ထှကျသှားတဲ့နောကျ ဒီရှာကို သိက်ခာတျောရဆရာတှေ အသဈမရောကျသေးခငျ ၁၉၃၇ မှာ ဒီအိမျကွီးကို ငှားရမျးလိုကျသူက သဘာဝလှနျ ဖွဈရပျတှကေို လလေ့ာသူ Harry Price က ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ သူနဲ့အတူ ဒီအိမျအကွောငျးကို လလေ့ာဖို့စိတျဝငျစားသူတှကေို ဖိတျချေါကာ အတူတကှ လလေ့ာစုံစမျးကွပါတယျ။
ဝိဉာဉျတှကေို ဆငျ့ချေါတဲ့နညျးနဲ့ စုံစမျးကွညျ့တဲ့အခါ သူတို့ဟာ ဝိဉာဉျနှဈခုနဲ့ ဆကျသှယျမိပါတော့တယျ။ တဈခုကတော့ Marie Lairre ဆိုတဲ့ ဝိဉာဉျပါ။ သူဟာ ပွငျသဈလူမြိုးဖွဈခဲ့ပွီး သီလရှငျလောငျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ နောကျမှာတော့ ၁၇ ရာစုက ဒီအိမျကွီးပိုငျရှငျရဲ့သား ကို လကျထပျဖို့ သီလရှငျဘဝကို စှနျ့လှတျကာ အင်ျဂလနျနိုငျငံကို လိုကျလာခဲ့တာပါ။
အင်ျဂလနျမှာ လကျထပျပွီး နထေိုငျရငျး သူ့ယောကျြားဖွဈသူက သူ့ကို သတျကာ ဒီအိမျကွီးရဲ့ နံရံတှကွေား မွှုပျနှံခံရပါတယျ။ သူဟာ မကြှတျလှတျနိုငျသေးတာကွောငျ့ အခုလိုခွောကျလှနျ့နရေတာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ နောကျထပျဝိဉာဉျကတော့ Sunex Amures ဆိုတဲ့ ဝိဉာဉျပါ။ အဲဒီဝိဉာဉျကတော့ အသတျခံရသူရဲ့ အရိုးစုတှပေျေါပေါကျလာဖို့ တဈနကေ့ရြငျ ဒီအိမျကွီးကို မီးရှို့ပဈမယျလို့ ဆိုခဲ့ပါသတဲ့။
နောကျ နှဈအနညျးငယျအကွာ ၁၉၃၉ ခုနှဈမှာတော့ Borley Rectory အိမျကွီးဟာ တကယျပဲ မီးလောငျသှားခဲ့ပါတယျ။ စုံစမျးစဈဆေးမှုတှအေရ မတျောတဆလောငျတဲ့မီးဖွဈကွောငျး အတညျပွုနိုငျခဲ့ပါတယျ။ မီးလောငျအိမျကွီးရဲ့ တဈနရောမှာ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးရဲ့ အရိုးတှကေို တှခေဲ့ရတာကွောငျ့ ကောငျးမှနျစှာ သွင်ျဂိုလျခဲ့ပါတယျ။
Related Article >>> ခတျေအဆကျဆကျ သရဲရုပျရှငျတှေ ရိုကျကူးခံရတဲ့ အိမျကွီးတဈလုံးအကွောငျး
မီးလောငျပွီးနောကျ တှရေ့တဲ့ Borley Rectory အိမျကွီး
အဲဒီကတညျးက အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ သရဲအခွောကျဆုံးလို့ နာမညျဆိုးနဲ့ ကြျောကွားခဲ့တဲ့ Borley Rectory စံအိမျကွီးဟာ အဆုံးသတျခဲ့တာပါပဲ။ ယောငျးတို့ အင်ျဂလနျနိုငျငံကို ရောကျရငျ အဲဒီအိမျကွီးနရောကို သှားကွညျ့မလားဟငျ ….
Tagged England, Friday Horror, history, Poltergeist, Spirit
Posted on September 21, 2018 Author Sugar Cane
ဆေးထိုးကြမ်းကြသူများအတွက် အသုံးချနည်းအသွယ်သွယ် 😛
မြန်မာတို့ယုံကြည်သော စုန်းပညာ နှင့် လူသားစားစုန်းအကြောင်း
ယောင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီတွေက ယောင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကြောင်း ပြောပြနေတယ်ဆိုတာ သိပါသလား